Nanao famangiana Pastôraly teto amin’nyDistrikan’ny Bemaneviky ihany koa ny Ray aman-dReninay ato amin’nyDiosezin’Ambanja, Mônsenera Rosario Vella ; ny 13-14-15 Jiona 2014 lasa teo. Fotoana sarobidy ho an’nyDistrikanay tokoa io fotoana io satria natokan’n yEveka ihany koa hanomezana nySakramentan’ny Fankaherezana ho an’ireo tanora sy olon-dehibe izay vonona amin’izany. Miisa 60 mahery ireo nandray ioS akramenta io tamin’izany. Fihaonam-ben’ny Kristianina aty amin’ny Distrikan’nyBemaneviky koa moa tamin’io fotoana io ka hita tamin’izay fa maro ireo kristianina, indrindra ireo tanora no niara-nivavaka sy nanotrona ireo nandray ny Sakramenta ireo. Isaorana anie Andriamanitra fa nirindra sy nilamina soa aman-tsara iny famangiana nataon’nyEveka iny, ary tsapa fa nitondra Fahasoavana ho an’ny Distrika atyBemaneviky manontolo.
Nisy ihany koa ny fanomezana Sakramentan’nyBatemy sy Komonio Voalohany, tamin’ny 22 Jiona 2014 lasa teo ; izay natao isaky ny renivohi-paritra (Central) ato amin’nyDistrika. Ireo Pretra mpiandraikitra eto an-toerana no nanatanteraka izany. Ivom-paritra 5 no nanaovana izany. An-jatony ihany koa ireo olona nandray ireo Sakramenta ireo tamin’izany, ary nahitana ireo sokajin’olona isan-karazany : ankizy, tanora, olon-dehibe. Tanteraka soa aman-tsara ireo noho ny fiaraha-miasa tamin’ireo lahika manandray anjara tamin’ny fampianarana katesizy sy fandalinam-pinoana.
Fanaonay aty Bemaneviky ny manatanteraka fihaonan’ny tanorain-teloisan-taona.Ireo no ankalazanay ny herinandron’ny MSJ;fihaonam-ben’ny tanora aty aminay. Ny vanim-potoanan’ny fetin’i Don Bosco, ny sampakazo, ary ny andron’nyPantekoty no fanatanterahanay izany. Ny fihaonana voalohany sy faharoa moa dia natao tetoBemaneviky, renivohitry ny distrika ihany. Tao Ambohitrandriana, renivohitry ny faritra (central) iray etoamin’nydistrikan’iBemaneviky kosa, no nanaovana ny fihaonana faram-parany tamin’ityTaona Pastôraly 2013-2014 ity, izay efa fanao isan-taona. Ny foto-kevitra nodinihina tamin’ny fihaonana voalohany, izaynatao tamin’ny Vanim-potoana fankalazana ny fetin’i Don Bosco, dia nanarakaizay voatondro ho dinihina amin’ny herinandron’ny MSJ eran’iMadagasikara. Nyfihaonana faharoa : andron’nySampakazo, sy fihaonana fahatelo : Vanim-potoanan’ny Pantekoty kosa dia niompana tanteraka amin’n yfandalinana ny hafatry ny Papa ho an’ny tanora : « SAMBATRA NY MAHANTRA AM-PANAHY ».Azo lazaina ho maro ny tanora nanatrika ireo fihaonana ireo, indrindra ity fihaonana farany teo ity satria nihoatra ny 700 izy ireo no tonga niara-nivory. Io andro io ihany koa moa no nandraisana ireo ankizy sy tanora maro hiroso amin’ny fiainana kristianina,dia ny dingana amin’ny Batemy izany.Miisa 300 mahery ihany koa izy ireo.Nilamina tsara ny fizotry ny fandaharam-potoana rehetra ; ary mahavelom-panantenana ny mahita ny finiavan’ireo tanora te handalina ny finoana kristianina. Raha mitohy ny fihaonam-be toy itony dia tsy isalasalana fa hitombo isany tanora sahy hirotsaka ho vavombelon’I Kristy tokoa eo amin’nyfiainana maha tanora kristianina azy.
Ireo fihaona telo miantoana ireo ihany koa no efa nanomanana ireo tanora eto amin’ny distrikanay mba hiatrika ny FIHAONAMBEN’NY TANORA AMIN’NY FARITRA AVARATR’I MADAGASIKARA (MSJ zone nord) ; izay hatao eto Bemaneviky ny 10 ka hatramin’ny 14 septambra 2014 ho avy izao. Ny loha hevitra ho dinihina amin’io fihaonam-paritra io amin’ny akapobeny dia hifototra amin’ny FAMONJENA FANAHY, FANDALINANA NY FIAINAMPANAHY SALEZIANINA, FIANARANA MIVAVAKA….